ब्लगलाई स्वतन्त्र रुपमा नै सञ्चालन हुन दिनुपर्छ :जेवी विश्वकर्मा - MeroReport
ब्लगलाई स्वतन्त्र रुपमा नै सञ्चालन हुन दिनुपर्छ :जेवी विश्वकर्मा
आफुलाई अनुसन्धानकर्ता र सञ्चारकर्मी भन्न चाहने जेवी विश्वकर्मा विशेष गरी सामाजिक-राजनीतिक विषयमा बहिस्करणमा पारिएका समुदायको दृष्टिकोणबाट अध्ययन-अनुसन्धान र लेखनमा विशेष रुचि राख्दछन् । पत्रकारिता क्षेत्रमा सहजकर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गरेका जेवी अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)मा सूचनाको हकसम्बन्धी परियोजनाको संयोजक हुन् ।
जेवीका समसामयिक राजनीति, सामाजिक-सांस्कृतिक रुपान्तरण, भूमिसुधार, मिडियामा दलित समुदायको सरोकार र सहभागीता जस्ता विषयमा दर्जानौं लेख प्रकाशित भएका छन् भने उनको पहिलो पुस्तक ‘नेपाली मिडियामा दलित : सहभागीता र विषयवस्तु’ हो जुन वि.सं. २०६९ मा मार्टिन चौतारीबाट प्रकाशित भएको थियो । यो पुस्तक नै दलित र मिडियासँग सम्बन्धित अनुसन्धानमुलक एउटा मात्रै पुस्तक पनि हो । पुस्तक लेखनका अलवा उनी ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै जेवी विश्वकर्मालाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
जेवी विश्वकर्मालाई सोसल मिडियाको क्षेत्रमा के भनेर चिन्ने बताइदिनुस न ।
म सोसल मिडियामा सामान्य सोसल मिडियाबारे साक्षर व्यक्ति हुँ । अन्य व्यक्तिहरुको ब्लगहरु निरन्तर हेरिरहन्छु र सूचना तथा ज्ञान हासिल गरिरहेको हुन्छ । म विशेष गरी ट्वीटर, ब्लग, फेसबुक आदि चलाइरहेको हुन्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालसँग निरन्तर जोडिरहन चाहने जिज्ञासु नै बढी हुँ जस्तो लाग्छ ।
ब्लगिङ गर्न कहिलेलेखि थाल्नुभयो र कसरी सुरु गर्नुभयो ॽ
मैले ब्लगिङ गर्न सन् २००७ देखि सुरु गरेको हुँ । मैले यो ब्लग चाहिँ सूचनाहरुलाई संग्रहित गर्ने उद्देश्यले नै सुरु गरेको हुँ । विशेषगरी आफूलाई मन पर्ने र आवश्यक परिरहने खालका सूचनाहरु सहजै पाउन मुस्किल हुन्छ, पाइहाले पनि तुरुन्तै पाउन गाह्रो हुन्छ । ब्लगमा ती सूचनाहरु (विशेषगरी महत्वपूर्ण समाचार, लेख, रचना, दस्तावेज आदि) संग्रहित गरिराख्दा ती सूचनाहरु सहजै पाउन सकिने भएका कारण ब्लग सुरु गरेको हुँ ।
दोस्रो, आफूले लेखेका र विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका लेखहरुलाई ब्लगमा राख्दा सँधैभरि सुरक्षित रहने र सहजै ती सूचनाहरुमाथि पहुँच हुने भएका कारण ब्लग सुरु गरेको हुँ ।
तेस्रो, लेखिएका सबैखाले लेख वा रचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुन्छ भन्ने हुँदैन र सबैको पहुँच पत्रपत्रिकामा हुन्छ भन्ने पनि छैन । त्यसैले लेखिएका लेख वा रचनाहरुलाई संग्रहीत गर्ने र इन्टरनेटसम्म पहुँच पुगेका व्यक्तिहरुसम्म पु¥याउन सहयोगी हुने भएकोले ब्लग सुरु गरेको हुँ ।
तपाई त सञ्चार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनुभएको त छ तर पत्रकारका रुपमा या संचार अध्येताका रुपमा भनेर छुट्याउनु परेमा ॽ
म आफूलाई पत्रकारका रुपमा भन्दा पनि संचार अध्ययेता हुँ भन्न रुचाउँछु । मैले पूर्णकालीन पत्रकारका रुपमा भन्दा पनि समसामयिक सन्दर्भबारे विमर्शका लागि विभिन्न विषयवस्तुबारे लेख्दै आइरहेको छु । यसका साथै म मिडियाका अन्तर्वस्तुलाई आलोचनात्मक रुपमा हेर्न, विश्लेषण गर्न र बहस गर्न रुचाउँछु । त्यसैले म पत्रकारभन्दा बढी संचार अध्येयता हुँ ।
संचारकर्मसंग जोडिएको मानिसलाई आफ्ना लेख रचना या सुचनाहरु अभिव्यक्त गर्ने माध्यम पनि प्रशस्तै हुन्छन तर पनि यहाँले ब्लग चलाईरहनु भएको छ, किन ॽ केका लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छॽ
अहिलेको समयमा ब्लग स्वतन्त्र रुपमा आफूलाई लागेका कुराहरु अभिव्यक्त गर्ने माध्यम सामाजिक संजाल नै हो । पत्रपत्रिकामा कुनै विषयमा लेख लेख्दा त्यसको निश्चित मापदण्ड र स्पेश हुन्छ । निश्चित शब्दसंख्यामा लेख लेख्ुपर्ने हुन्छ । यस्तो सीमितताका कारण कतिपय अवस्थामा आफूले अभिव्यक्त गर्न खोजेका विचारहरु पूर्ण नहुन पनि सक्छन । त्यस्तो अवस्थामा ब्लगमा आफूले अभिव्यक्त गर्न खोजेका सन्दर्भहरु खुलस्त लेख्न पाइन्छ ।
अर्को कुरा लेखिएका सबै लेख वा विचारलाई पत्रपत्रिकाले स्थान दिन्छन् भन्ने हुँदैन । अखबारको सम्पादकीय नीति, संचारगृहको आफ्नो एजेण्डा जस्ता कारणले कतिपय लेख प्रकाशित नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा अभिव्यक्तिको प्रभावकारी माध्यम ब्लग हुने भएकाले पनि म ब्लगमा आफ्नो अभिव्यक्ति समावेश गर्ने गर्छु । अगाडि नै भनेजस्तै सूचनाहरुको संग्रह गरी आवश्यक समयमा सहजै ती सूचना लिनका लागि अन्य लेखकका लेख, अन्तर्वार्ता आदि पनि ब्लगमा समावेश गर्ने गरेको छु ।
तपाईले http://jbbiswokarma.blogspot.com/ बाहेक अरु पनि ब्लग चलाउनु हुन्छ कि ॽ
मैले यसबाहेक अन्य ब्लग संचालन गरेको छैन । यही ब्लगलाई पनि समयअनुसार जति सामाग्रीहरु राख्नुपर्ने थियो, त्यति मात्रामा राख्न सकेको छैन ।
आफ्नो ब्लगमा समसामायिक कुरा, कथा, कविताहरु धेरै राख्नुभएको छ, यी कुराहरु मध्ये पाठकले धेरै चाहिँ तपाईका कुन कुराहरु धेरै पढ्छन जस्तो लाग्छ ॽ
मेरो ब्लगमा धेरैजसो लेखहरु नै समावेश गरेको छु । विशेष गरी समावेशीकरण, राज्यको रुपान्तरण, भूमि सुधार, दलित अधिकारसँग सम्बन्धित लेखहरु मैले समावेश गरेको छु । धेरैजसो व्यक्तिहरुले तिनै लेखहरु हेर्छन जस्तो लाग्छ । मैले ब्लगमा राखेको साहित्यकार आहुतिको निकै चर्चित ‘गहुँगोरो अफ्रिका’ निकैले हेरेको पाउँछु । पछिल्लो समय मैले पनि आफ्ना साहित्यिक रचनाहरु राख्न सुरु गरेको छु, साहित्यमा रुचि हुने व्यक्तिहरुले मेरा कविताहरु पनि पढ्ने गरेको पाउँछु ।
प्रायः मानिसहरु आफ्नो ब्लगमा आफ्ना रचनाहरु राख्छन तर तपाईले ब्लगमा राख्नु भएका रचनाहरु धेरै जसो त अरुका नै छन् । ति विषयवस्तु मन परेर हो या अरु कुनै कारणले अरुका रचना राख्नु भएको हो, बताइदिनुस् न ॽ
म नेपाली समाजका विविध पाटा वा पक्षबारे यथेष्ट बहस हुनुपर्छ, बहसले नै नयाँ विचारहरु जन्माउँछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु । त्यसैले मैले ब्लगको नाम नै मिडिया डिस्कोर्स राखेको छु । डिस्कोर्सका लागि फरक फरक विचारको अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ । फरक-फरक विचारको अध्ययन र विश्लेषणबाट मात्रै नयाँ विचार जन्मिन्छ वा पाठकले पनि आफ्नो धारणा निर्माण गर्न पाउँछ ।
त्यसैले मैले यहाँ अन्य व्यक्तिहरुका लेखहरु पनि समावेश गरेको छु । उदाहरणका लागि मैले लेखेका र प्रकाशित अधिकांश लेखहरु समावेशी लोकतन्त्रका पक्षमा लेखेको छु । यद्यपि, मैले पोष्ट गरेको प्रतीक प्रधान र केदारनाथ कोइरालाको लेख निकै कन्ट्रोभर्सी छ । किनभने, यस्ता लेख र लेखकको विचारबारे पनि पाठकहरु जानकार हुन सहज होस र सही धारणा निर्माण गर्न सहयोग गरोस भन्ने हो । यस्ता विचारहरुले क्रिटिकल मास निर्माण गर्न सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ । यसका साथै मैले डोरबहादुर विष्टको अन्तर्वार्ता साभार गरेर राखेको छु । यस्ता अन्तर्वार्ताको सामाजिक अनुसन्धानमा समेत निकै महत्व हुन्छ । त्यसैले अन्य व्यक्तिहरुको लेख र विचारलाई पनि मैले ब्लगमा समावेश गरेको हुँ ।
अहिलेका युवा पिढी आफ्ना कुरा ब्यक्त गर्न ब्लगलाई उपयुक्त थलो मान्छन र ब्लगिङ् गरिरहेका पनि छन् । यहाँले चैँ नेपाली ब्लगिङ र सोसल मिडियाको प्रभाव तथा भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छॽ अनि नेपालमा यसको प्रयोगलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ सदुपयोग या दुरुपयोगॽ
ब्लग इन्टरनेट पहुँच भएका ठाउँका सबैको अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम हो । कहिल्यै पत्रपत्रिकामा नलेखेका तर निकै राम्रो लेखहरु ब्लगमा युवा पुस्ताले लेखेको देखिन्छ । युवा पुस्ताको भावना, बुझाइबारे जान्नका लागि युवाहरुले सञ्चालन गरेको ब्लग निकै प्रभावकारी देखिन्छ । यसले पारेको अर्को प्रभाव भनेको लेखनमा निरन्तरता पनि हो । उत्साहसाथ ब्लग सञ्चालन गर्ने युवाहरुले केही न केही नयाँ कुराहरु ब्लगमा पोष्ट गरेको देखिन्छ । यसले नयाँ ज्ञानसँग साक्षात्कारका लागि पनि सहयो गरिरहेको छ । आफ्ना कुराहरु अभिव्यक्ति गर्ने, सिर्जनाहरुलाई संग्रहित गर्ने र पाठकसम्म पुर्‍याउने काममा ब्लग निकै सहयोगी माध्यम हो । इन्टरनेटको उपयोगिता बढ्दै गर्दा यसको महत्व पनि दिनहुँ जसो बढ्दै गइरहेको छ । अहिले पनि साहित्य, सूचना, मनोरञ्जन आदि फरक फरक विधामा ब्लगहरु सञ्चालन सुरु भएको छ, आगामी दिनमा विषयगत रुपमा नै ब्लगिङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यद्यपि, ब्लग सार्वजनिक हुने भएका कारण सामग्रीहरु समावेश गर्दा चाहिँ ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । पोष्ट गरेका सामग्री सार्वजनिक हुन्छन्, अन्य धेरै पाठकसम्म पुग्ने भएकाले आफूले पोष्ट गरेको सामग्रीको असर के पर्छ भनेर सुरुमै समीक्षा गर्नु राम्रो हुन्छ ।
सञ्चार अध्येताका रुपमा तपाईले मुलधारको पत्रकारिता र ब्लग तथा सोसल मिडिया बिच के फरक पाउनुभएको छ ?
मूलधारको पत्रकारिता त्यसमा पनि अखबारको कुरा गर्ने हो भने तिनको अन्तर्वस्तु निर्माण वा विषयवस्तु निर्माणको लामो प्रक्रिया छ । संवादाताले संकलन गरेको सामग्रीको विभिन्न चरणमा सम्पादन, तथ्य वा तथ्याङ्कको पुनःपरिक्षण गरी प्रकाशित गरिन्छ । व्यवसायिक पत्रकारिताका दृष्टिले हेर्दा संचारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, पत्रकार आचार संहिता आदिको ख्याल अखबारका विषयवस्तुमा बढी ध्यान दिइनुपर्छ । यस्तो माध्यममा लेखकका विचार पनि सम्पादन भएर आउने गरेको पाइन्छ भने निश्चित शब्दसंख्यामा नै लेखलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा लेखकले अभिव्यक्त गर्न खोजेका सबै विचार त्यस्ता लेखमा नआउन पनि सक्छ ।
तर, ब्लगमा लेखकले आफूले चाहेको कुरा शब्दको सीमितताभन्दा बाहिर गएर खुलस्त लेख्न सक्छ । ब्लगका विचारहरुमाथि अन्य सम्पादकले सम्पादन नगर्ने हुनाले आफूले अभिव्यक्त गर्न खोजेकै विषयवस्तु ब्लगमा समावेश गर्न सकिन्छ । त्यसैले नै युवापुस्ता ब्लगिङमा बढी आकर्षित भएको मान्न सकिन्छ ।
ब्लगिङ वा ब्लगरका लागी आचारसंहिताको आवश्यकताको कुरापनि उठिरहेको हुन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ, जरुरी छ ब्लगरका लागी आचारसंहिता ॽ
ब्लगिङ स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको माध्यम हो । त्यसकारण ब्लगलाई स्वतन्त्र रुपमा नै सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । यद्यपि, ब्लगिङ गरिएका कुराहरु सार्वजनिक हुने र त्यसले ठूलो संख्यालाई पनि प्रभाव पार्ने हुनाले ब्लगरहरुले पोष्ट गर्ने विषयवस्तु, यसले पार्नसक्ने प्रभाव आदिबारे ब्लगरहरु सचेत चाहिँ हुनुपर्छ ।
नेपाली ब्लगरहरुले तपाँईले भनेजस्तो सचेतनाको पालना कत्तिको गरेको पाउनुभएको छ ॽ
अहिलेसम्म ब्लगकै कारण सामाजिक बिश्रृङ्खलता आउने, विभिन्न जाति वा समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने काम ब्लगले धेरै भूमिका खेलेको देखिँदैन । यद्यपि, पोष्ट गर्ने सामग्री र यसले पार्नसक्ने सकारात्मक/नकारात्मक असरबारे चाहिँ ब्लगरहरुले अझैं सजकता अपनाउनुपर्छ ।
मुलधारका सञ्चार माध्यमले सोसल मिडियाको कसरी प्रयोग गरेको पाउनुभएको छ ॽ
मूलधारका भनिने मिडियाले समाचारका क्लू, सामाजिक बहसका लागि सोसल मिडियाको पर्याप्त मात्रामा उपयोग गरेको देखिन्छ । कतिपय समाचारहरु सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनाकै आधारमा तयार हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । उदाहरणका लागि एनेकपा (माओवादी) नेता डा. बाबुराम भट्टराईले फेसबुक वा ट्वीटरमा लेखेका कुरा समाचारका रुपमा आउने गरेका छन् ।
यसका साथै सामाजिक सञ्जालमा भएका बहसहरुका आधारमा लेख, रचना आदि पनि प्रकाशित हुने गरेका छन् । यतिमात्रै होइन, मूलधारका भनिएका मिडियाका अन्तर्वस्तुलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत शेयर गरेर बढीभन्दा बढी व्यक्तिसम्म पुर्‍याउने गरेको पाइन्छ । यसरी मूलधारका मिडियाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग प्रभावकारी रुपमा गरेको मान्न सकिन्छ ।
साथै सोसल मिडिया र ब्लग मार्फत आएका सुचनाहरु लिने या राख्ने कुरामा मुलधारका अनलाईनहरु र मुलधारका संचारमाध्यमहरुले आचारसंहिता पालाना गरे नगरेको, कस्तो पाउनु भएको छ ॽ
यो चाहिँ एउटा अध्ययनकै विषय हो । विशेष गरी अनलाइनमा आएका समाचार सामग्री अनलाइनमै जस्ताको तस्तै साभार हुने गरेको देखिन्छ । अर्कोतिर, धेरै एफएम रेडियो स्टेशनले समाचारको मुख्य श्रोतको रुपमा अनलाइनहरुलाई लिने गरेको देखिन्छ ।
कतिपय समाचार त अनलाइनबाट लिएर जस्ताको तस्तै प्रसारण भएको पनि पाइन्छ । जनतालाई सुसूचित गराउने कोणबाट हेर्दा सूचना दिइनु राम्रो काम हो, तर अनलाइनका सूचना कतिको आधिकारिक हुन्, गलत सूचना दिइएको छ कि ? भन्ने कुृराको भेरिफिकेशन गर्ने काम समेत हुँदैन । यसले कुनै बेला निकै ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।
अर्कोतिर, यसरी समाचार वा सामाग्री साभार गर्दा स्रोतको उल्लेख गरिँदैन । कम्तीमा समाचारहरु साभार गर्दा नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन र पत्रकार आचार संहिताको एकपटक अध्ययन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
ब्लग लेखन वा ब्लगमा समेटिएका सामग्रीसँग जोडिएका कुनै रमाइला घटना वा प्रसंग भए बताइ दिनहोस न ।
मेरो ब्लगमा अलि अनुभूतिजन्य कुराहरु समावेश गरिएका छैनन् । अलि बहसका लागि लेखिएका लेखहरु बढी छन् । त्यसैले ब्लग हेर्ने साथीहरुले भ्रमण, दैनिक जनजीवन र अनुभूतिजन्य सामग्रीहरु समावेश गरिदिनुपर्‍यो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । अब, त्यस्ता सामग्रीहरु पनि लेख्ने प्रयत्न गर्छु ।
केहीले ब्लगिङलाइ नागरिक पत्रकारिता पनि भन्ने गरेको पाइन्छ, के ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता नै हो त ॽ
ब्लगिङलाई धेरैले नागरिक पत्रकारिता भन्ने गरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना सम्प्रेषणका दृष्टिले यसलाई नागरिक पत्रकारिता भनिएको हो भन्ने मैले बुझेको छु । यद्यपि, पत्रकारिताका केही विशिष्ट मूल्य, मान्यता र पद्दति हुन्छन्, त्यसलाई यसले सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ ।
मैले ब्लगको सुरुआत गरेको करीब ७ वर्ष भइसकेछ । तर, यसलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्ने काम हुन सकेको छैन । मैले पोष्ट गरेका सूचना मेरो मात्रै निजी होइन, सूचनाको सार्वजनिक स्रोत पनि हो ।
यसमा पाठकहरुको सिर्जनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको छु । मेरो रिपोर्टले विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको ब्लगकै बारेमा पनि निरन्तर बहस चलाइ रहोस र सामाजिक सञ्जालका विभिन्न आयामबारे पाठहरुलाई बुझ्ने काममा अगाडि बढिरहोस भन्ने कामना गर्दछु ।
Comment by Amuna Chapagain on December 11, 2014 at 11:57am